इमरान खानले पाकिस्तानको लागि साहसिक "छक्का" प्रहार गरे, के गर्ला त भारत ? - E ALL NEPAL
इमरान खानले पाकिस्तानको लागि साहसिक “छक्का” प्रहार गरे, के गर्ला त भारत ?
पाकिस्तानभन्दा भारतको सैन्यशक्ति बलियो छ । तर, पाकिस्तान पनि आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हो ।
इमरानले आफ्नो आणविक शक्तिको घमन्ड देखाएका छैनन् । न त उनले चीनलाई देखाएर भारतलाई तर्साउन खोजेका छन्, जसरी भारतले अमेरिकालाई देखाउने गरेको छ ।
यता भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अवस्था फरक छ । तीन महिनापछि हुने लोकसभा चुनावका कारण उनी पाकिस्तानप्रति कडा रवैया अपनाउन वाध्य छन् । किनभने थोरै मात्रै लचिलो देखिएको खण्डमा पनि चुनावमा उनको दल पछि पर्न सक्छ । पाकिस्तानलाई झुकाउन सफल भएको सन्देश जनतालाई दिन सकेको खण्डमा उनले चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छन् ।
(एजेन्सीको सहयोगमा) अनलाइन खबरबाट
अब नेपालमै पेट्रोलियम खानीको उत्खनन हुने, दैलेख र पाल्पामा पेट्रोलियम खानीका लागि चिनसँगको सहकार्य हुदै
मदन भण्डारी झै वाईडबडी घोटलालाई पन्छाउन मन्त्री अधिकारिको हत्या वा दुर्घटना – योगेस भट्टराई